Ngaba uhlala ubona u-12: 22 iwotshi, okanye ngaba ukuphindaphinda okungu-1222 kubonisa yonke indawo ojonga kuyo? Kwaye kuthetha ntoni xa uqhubeka ubona u-1222? Ukubona inani elingu-1222 ngokuphindaphindiweyo ngeli xesha ebomini bakho ayisiyongxaki nje, kuba u-1222 uyakufuna. Embindini wentliziyo yakho, uziva ukuba uMkhosi oMkhulu uzama ukunxibelelana nawe kwaye akubonise 'indlela' eya apho umphefumlo wakho ufuna ukuya khona ngaphandle kokulibazisa. Uyacelwa ukuba ufumane intuthuzelo ngento ohamba kuyo ngoku, kuba ukhokelwa nguThixo ukuba ufumane indlela yokuphuma.
Xa uqhubeka ubona i-1222, ngumyalezo ovela kuThixo oqikelela oko ulungele ukuqala isigaba esitsha kwiintsuku ezizayo . Ukhokelwa kwindlela yakho yokufumana isibindi sokuvala umnyango kwizinto zakho zangaphambili kunye nokuvula umnyango omtsha oya kwikamva lakho. Kwisango le-1222, uMhlaba uyakukhuthaza Yiba nokholo njengoko uthatha inyathelo lakho elilandelayo elisa kutshintsho oluqinisekileyo .
Gcina ukhumbula, kule minyaka ilishumi idlulileyo, indlela yakho yokucinga yayihlukile kule yanamhlanje. Njengoko ucinga nzulu ngolu luvo, uyaqonda ukuba ufunde izinto ezintsha eziguqule iindlela zakho zakudala zokucinga. Kwaye ngolu lwazi, uyakuqonda ukubaluleka kokufunda, ukuphucula nokukhula. Ukulungele 'ukugcina ixesha lakho elidlulileyo kwixa elidlulileyo,' kwaye ukulungele ukuqhubela phambili ngaphandle kobunzima bexesha elidlulileyo lucothisa inkqubela yakho. Ke ngoko, isizathu sokuba uhlale ubona i-1222 kuyo yonke indawo kukuba uxhaswa nguThixo ukuba uthathe inyathelo eliya phambili kuhambo lwakho oluya apho umphefumlo wakho unqwenela ukuba khona.
Njengoko ulungiselela ukuya phambili, uMdali kunye neqela lakho lokomoya leengelosi kunye nezikhokelo zomoya zithumela imiqondiso ephindayo yamanani ukufumana ingqwalaselo kunye nokukhokela indlela yakho. Ngoncedo lwabo oluvela kuThixo, uyazi ukuba uyaxhaswa kwaye ukhokelwe xa ubona inani le-1222 yamanani aphindaphindiweyo phambi kwakho. Njengoko uziva wamkelekile umphefumlo wakho, Kungalo mzuzu ukuba ube neqhayiya ngale nto ukuyo kwaye uhambe kude kangakanani . Yiyo loo nto xa ubona ingelosi engu-1222 iphinda-phinda, intsingiselo yokomoya kukuqhubeka kwinkqubela phambili yakho kwaye uzenze izinto.
Nceda uqaphele, zininzi iintsingiselo zika-1222, kwaye kubalulekile ukuba uyithembe intuition yakho ukuba ikukhokele kwinto eyinyani kuwe. Ukukunceda uhambe kuyo yonke le nto, nazi iintsingiselo zokomoya eziyi-1222 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona i-1222 kuyo yonke indawo ekujikelezile. Xa uhlola ukuba kuthetha ntoni u-1222 kuwe, themba umyalezo oziva ulungile kuwe.
Intsingiselo yokuqala ye-1222: Yiba Flexible kwaye uguqule kwiindlela ezintsha
Intsingiselo ye-1222 kukukhulula iipatheni zakudala zokucinga kunye nemikhwa yakudala ecothisa inkqubela phambili yobomi, ukuze ube nokuvuleka kwaye ubhetyebhetye kwiindlela ezintsha zokujonga umhlaba okujikelezileyo. Njengenxalenye yendaleko yomntu, ukuba bhetyebhetye kuyafuneka ukuze utshintshe kwaye ukhule, ukuze uqhubele phambili kwindlela yobomi bakho ukufezekisa iinjongo zakho. Njengoko indlela yobomi bakho isenzeka ngokwendalo, uyakhunjuzwa ukuba ubhetyebhetye ngokugoba ngotshintsho lobomi kwaye uqukuqela kwisingqi somphefumlo wakho.
Ke, xa uqhubeka ubona u-12: 22 ngalo lonke ixesha ujonga ixesha, umyalezo weengelosi kukuhamba ngendlela yakho ngamaxesha otshintsho ngokuvuleleka kwaye ubhetyebhetye kumathuba amatsha kunye nemibono emitsha eza kuwe. Ulwalathiso lobuthixo kukuhlengahlengisa kwaye ube bhetyebhetye, ukuze ukwazi ukusukela kwiinjongo zakho zobomi ngelixa ilizwe lishukuma kukujikeleza. Nokuba uhlangabezana notshintsho ekhaya, esikolweni, okanye emsebenzini, uyakhunjuzwa ukuba uhlengahlengise utshintsho olwenzekayo kuwe , Ke ungasondela kuNyaniso. Ngolu lwazi, indlela yakho yokucinga iba bhetyebhetye ukuze wenze izigqibo ezifanelekileyo zokukunceda uqhubele phambili kwaye ugqwese. Okona kubaluleke kakhulu, intliziyo yakho yokomoya iya kuqhubeka ivuka kwaye ukuzithemba kwakho kuya kukhula njengoko usakha amandla akho okuziqhelanisa nokuhamba kobomi.
Njengoko uphumelela koku kuhamba, inombolo kaThixo engu-1222 ikukhumbuza ukuba uhamba uhambelana noMdali ongapheliyo. Ume ngelizwi lakho kuyo yonke into oyenzayo ngokuthembeka, uhlengahlengisa uxinzelelo lobomi ngokuzola, kwaye uziqhelanisa nendawo yakho entsha ngonyamezelo. Ukusuka kolu luvo, unokuzibona uziqhelanisa neenkqwithela zobomi ezinje ngomthi womngcunube owomeleleyo ugoba kwaye ujikeleziswa yimimoya, njengoko uhlala umile ngokuqinileyo kumhlaba ochumileyo wengqibelelo, ukuzola, kunye nokunyamezela.
Intsingiselo yesi-2 ye-1222: Yikhulule kuMjikelo weendlela zokuCinga okuDala
Xa ubona ipateni yamanani ayi-1222 ephindaphindayo ivela kwimbono yakho, uyakhunjuzwa ukuba ujonge ngononophelo imeko yakho yobomi kwaye uthathe inyathelo lakho elilandelayo ekwakheni indalo yobomi bakho.
Njengoko uthatha lo mzuzu ukuphonononga ubomi bakho, uyazi ukuba ulwazi kunye nesifundo samava akho sihlala kuwe kuwo onke amabakala okufunda ngobukho bakho. Usisilumko ngakumbi ngoku, kwaye xa uphinda ukhumbula iinkumbulo zakho, uyaqonda ukuba wenze konke okusemandleni akho ngolwazi onalo ngalo lonke ixesha lokwenza izigqibo ngexesha lakho elidlulileyo.
Ngenxa yokuba ingqondo yakho igcina iinkumbulo ezingokweemvakalelo zokhetho lwangaphambili, usebenzisa ezi nkumbulo ukukunceda wenze izigqibo zakho zobomi ngoku. Kwaye ukunqanda ukuphindaphinda ukusilela okudlulileyo, usebenzisa iminyhadala eyadlulayo njengezikhokelo zokufunda ukukubonisa indlela engcono yokwenza ikamva elingcono.
Nangona kunjalo, ukuba uhlala kwaye uhlala uzibuyisa iinkumbulo zokudana ukukhusela ekuphindaphindeni kokuphoxeka okuzayo, ngokungazi uthintela inkqubela yakho kwimpumelelo yakho.
Nokuba uziva unamathele ngokweemvakalelo kumntu othile okanye umsitho, olu nxibelelwano lukugcina unamathele ekuqhubeleni phambili kuba iinkumbulo zazo zilawula umzuzu wakho wangoku. Eyona nto ibalulekileyo, usebenzisa onke amandla akho ukubambelela kwixesha elidlulileyo endaweni yokusebenzisa amandla akho akhoyo ukwenza ikamva lakho. Yiyo loo nto intsingiselo 'yokubona u-1222' iphindaphindwe yeka ixesha elidlulileyo ukuze ekugqibeleni uzibeke simahla kwaye uqhubele phambili ekugqibeleni .
Umzekelo, ukuba ukhumbula iingxaki ezingasonjululwanga ukususela ebuntwaneni okanye ezinye iimeko ezidlulileyo ezisakhokelela kwiimvakalelo ezingalunganga ngaphakathi kwakho, okanye ukuba ujikeleze ukugxeka umntu okanye isiganeko selishwa elidlulileyo, ukhawuleza ungene kumda ongalunganga ngalo lonke ixesha ubuya kwinto eyenzeka emva apho. Ngokwazi oku, uqala ukuthatha amandla akho kubo, kwaye kwangoko utshintshe umkhombandlela wakho ukungena kwindawo elungileyo apho unokuzimisela ukuphucula imeko yakho .
Ngokwenza njalo, uyasebenza ngokwenza utshintsho kuwe kwaye wamkele uxanduva kwisikhokelo sobomi osithathayo . Endaweni yokubambeka kwimeko enye ngokuphindaphinda indlela efanayo yokucinga nokugxeka, intsingiselo ka-1222 kukuyeka izinto ezingancediyo zihambe, kwaye ubuyise amandla akho ukuze ekugqibeleni uqhubele phambili kwindlela yakho ukuze ube ngowona ubalaseleyo umntu onokuba nebhongo ngaye.
Ngobuchule bakho, amanyathelo akho okuqala okholo aya kusekelwa kumbono wakho ocacileyo wekamva elingcono. Ngombono wakho omtsha, unokubona ukuba uxanduva lwakho ngokupheleleyo sisikhokelo kunye nesiphumo sobomi bakho.
Njengokuba ujonge ngakumbi ingelosi engu-1222 njengesikhokelo sikaThixo, uyavuma ukuba unenkululeko yokuzikhethela ukuphatha ubomi bakho ngendlela ekunika amandla okoyisa yonke imiceli mngeni. Okona kubaluleke kakhulu, uyakukhumbula oko Esi sahluko sebali lobomi bakho siyabhalwa ngoku, ke usenalo ithuba lokuba yimpumelelo, kunokuba ube lixhoba .
Yiba neqhayiya ngokuba ungubani.
Intsingiselo yesi-3 ka-1222: qhubela phambili nezifundo ozifundileyo
Xa usazi i-1222 ebonisa yonke indawo, intsingiselo kuwe kukuqhubela phambili kuhambo lwakho lomntu ngolwazi olufunyenweyo. Amava akho omntu malunga nokufumana ulwazi ngokuphila nangokufunda. Kwaye njengokuba uhlala kweli hlabathi, izifundo zakho ezithile zobomi zifundwa kumanqanaba ohlukeneyo obukho bakho.
Njengomzekelo, ukufunda isifundo sobomi kuyafana nokufunda isifundo esikolweni. Ungaphumelela kwinqanaba elilandelayo emva kokufunda nokupasa isifundo esithile sesikolo. Kodwa xa ungapasanga isifundo esithile, kuya kufuneka usiphinde kwa eso sifundo de isifundo sifundwe.
Yiyo loo nto, xa ubujonga ubomi bakho ngokwembono yokomoya, ukuphinda isifundo-kaninzi-kuhambo lwakho lomntu luhlobo lwamandla abambekileyo okanye umthwalo onzima odala ukuphazamiseka okuxineneyo kubomi bakho bemihla ngemihla. Kwaye ngenxa yoko, oku kuphazamiseka kuphazamisa kwaye kunciphisa inkqubela phambili yobomi bakho. Kodwa nje ukuba usamkele kwaye usiqonde isifundo esithile ekufuneka sisifundisiwe, kungalo mzuzu ingelosi inombolo engu-1222 iqukuqela iye kuwe. Uyabona ukuba lixesha lokuba uqhubele phambili kwisigaba sobomi ngolwazi lwakho olutsha, ukuze uqhubeke nokufumana oyinyani.
Njengomnye umzekelo, ukuba esinye sezifundo zakho zobomi simalunga nokuxolela umntu owakukhathazayo, kuya kuba bubulumko ukuqala ngenkqubo enzulu yokuxolela okuyinyani kuphela xa ukulungele ukuziphilisa.
Uyaqonda ukuba ukungaxoleli luhlobo 'lwamandla abanjiweyo' anokubonakalisa izifo. Ngolu lwazi, uyayiqonda loo nto Enye yeendlela ezinamandla zokucoca ubomi bakho kwimithwalo enzima sisenzo sokuxolela . Ke, endaweni yokusebenzisa amandla akho ukubambelela kumandla athe nca, uthatha isigqibo sokusebenzisa ngobulumko amandla akho ukuxolela. Xa ukulungele ukuxolela-ngokuvulekileyo okanye ngokuzolileyo-uqala ukususa la mandla anqabileyo emzimbeni wakho, emva koko uqalise kwangoko ukufumana imvakalelo yokukhanya kunye nokuhamba kwenkululeko ngaphakathi ngaphakathi.
Njengoko ubona kulo mzekelo, intsingiselo yokomoya ye-1222 kukufumana amandla akho okuqala inkqubo yoxolelo, ke ekugqibeleni ungahambela phambili kumjikelo wobomi bakho uye kwindawo engcwele apho unokufumana khona uxolo, kwakhona.
Khumbula, isenzo soxolelo yinkqubo ethatha ixesha. Xa usenza ixesha loku, uyazenzela ixesha. Kwaye ekugqibeleni, esona sipho sibalaseleyo onokuzinika sona sisipho soxolo nenkululeko.
Njengokuba ufunda ngakumbi ngawe kunye namandla akho ebomini, uyaqonda ukuba ezona zifundo zakho zibalulekileyo zivela kwiimpazamo kunye nokusilela, kwaye zizifundo ozifunde kwezi mpazamo kunye nokusilela ezikwenza ube namandla kwaye ube nobulumko namhlanje.
Ngaphezu kwako konke, uyayiqonda loo nto Ulwazi oluvela kwizifundo lufumaneka kumanqanaba ohlukeneyo obomi, kwaye ayilulo lonke ulwazi olufundwayo, oluqondakalayo, nolusetyenziswa ngobulumko ngumntu wonke ngexesha elinye nangesantya . Ngalesi sikhumbuzi, uyaqonda ukuba wenza konke okusemandleni akho ngokusekwe kulwazi onalo. Kwaye emehlweni oThixo, wonke umntu kuhambo lwabo lomntu wenza konke okusemandleni abo ngokusekwe kulwazi abanalo , kananjalo.
Kumfanekiso omkhulu, esinye sezona zifundo zinkulu ebomini malunga nokuxolela. Uyakhumbula ukuba ukuxolelwa nguMdali sisipho kuwe, kwaye Isipho sakho kwihlabathi kukuqonda kwakho ukuxolelwa kwenene .
Intsingiselo yesi-4 ka-1222: Yakha ikamva lakho kunye nootitshala
Xa ingelosi inombolo 1222 ibonisa njengesikhokelo sakho, intsingiselo yile ubudlelwane buza ebomini bakho ukukufundisa into okanye ukukunika ukuqonda okutsha . Eyona nto ibalulekileyo, utitshala uza ebomini bakho ukukunceda uqonde ixabiso lobomi bakho ukuze ufunde, ukhule, uguqule, kwaye uqhubeke nokuvela kuhambo lwakho lomntu.
Kuba wonke umntu kumava akho obomi ngutitshala wakho, njengomzali, iqabane, umntwana, umhlobo, okanye umqeshi, uyaqonda ukuba ufumana ulwazi kubo bonke ubudlelwane ohlangana nabo. Ukusuka kolu luvo, intsingiselo ye-1222 kukupakisha ityesi yakho yasemhlabeni ngezifundo zobomi kunye neminyaka yolwazi oyifumene kuyo bonke ootitshala bakho , ke unokuzinika ithuba lokusebenzisa ulwazi olufundileyo kwaye wenze ukhetho olunobulumko kwindlela yakho eya phambili.
Ngokubalulekileyo, izinto okhetha ukuziphatha kwityesi yakho yasemhlabeni zichaphazela ukuba ungubani kunye nendlela oziphatha ngayo. Ngale nto engqondweni, xa ubona u-1222 rhoqo, umyalezo wakho oyingcwele kukuqonda ukubaluleka kokuphatha iimfundiso ezilungileyo ezivela kubantu abakukhuthazayo nabakhuthazayo. Nokuba baziinkokheli ezibalaseleyo kwilizwe elibonakalayo okanye elingabonakaliyo, okanye abantu abaqhelekileyo kubomi bakho bemihla ngemihla, bayimizekelo emihle kunye neempawu ezixabisekileyo onokufunda kuzo, kwaye banokukukhokela kwindlela yokukukhuthaza ukuba ube ngoyena ubalaseleyo human ukuba unokuba.
Kwaye njengoko ujonga umhlaba okujikelezileyo, uyakuqonda oko usendleleni yokuba ngumzekelo , nayo, yabantu abafuna ukufunda kuwe. Ngokuzazi ngakumbi iingcinga zakho kwaye ukukhumbula izinto ezintle ozithethayo, indlela ozithetha ngayo, kunye nokhetho olwenzayo , unokuba ngumzekelo wokuxhobisa ngakumbi kubantu abakulandelayo.
Ngapha koko, uyaqonda ukuba umhlaba sisipili sakho, kwaye ubonakalisa abantu ochitha ixesha elininzi nabo ebomini bakho . Ngolu lwazi, uyakuqonda ukubaluleka kokungqongwa ngabantu abathembekileyo nabaphumeleleyo abanokukunceda wakhe ubomi obunqwenelayo. Kwaye xa ujonge aba bantu bakungqongileyo, uyaqonda ukuba banegalelo kumhlaba ochumileyo apho izimvo nezicwangciso zakho zihluma khona.
Kwaye ngalo mzuzu, uyakholelwa ukuba unokumitha umbono okanye icebo eliza kuguqula ubomi bakho ngendlela engakholelekiyo nethembekileyo. Ngokukhawuleza xa ubona umbono wakho kwaye ufumane isibindi sokulandela imishini yomphefumlo wakho, emva koko indlela eya kumbono wakho iya kutyhila indlela yayo.
Intsingiselo yesi-5 ye-1222: UkuKhanya ngokuKhanya njengoko usisa kwiSigaba sakho esilandelayo
Intsingiselo ye-1222 kukungena kwisigaba esilandelayo sobomi bakho ngomthwalo okhaphukhaphu njengoko usiva Ixesha lokuzibonakalisa kunye nokukhula kwangaphakathi . Ngomthwalo olula, uya kuqala ukuba nemvakalelo yokukhanya ekhuthazwa ziimvakalelo ezintle kwindlela eya kwinjongo yakho yobomi.
Iimvakalelo ezintle, ezinje ngovuyo kunye nethemba, zonyusa ukuqonda kwakho kumathuba akungqongileyo, kwaye zivula ingqondo yakho ekucingeni nakwimibono emitsha yendalo yakho ekhuthazayo. Xa ufumana intabalala yeemvakalelo ezintle, uziva ulula njengomoya, kwaye ufumana ulwandiso olukhulu kuzo zonke iindawo zobomi bakho obuhlala bukhula.
Kwangelo xesha, iimvakalelo ezingalunganga, ezinje ngexhala kunye noloyiko, zikunceda ukuba wazi iingxaki ezithile ebomini bakho ukuze ukwazi ukusombulula imiba kwaye uphilise kuzo. Ngesi sizathu, uyakuqonda oko Usikelelwe ngesipho seemvakalelo ukuze ukwazi ukuqonda imiyalezo yomzimba wakho kwiimeko zobomi . Kodwa, xa uchitha ixesha elininzi uziva iimvakalelo eziphosakeleyo ngokuphinda-phinda iingxaki zangaphambili, uya kutsala iimvakalelo ezingalunganga kunye neemeko ezikwenza uzive udiniwe kwaye uxinezelekile, eyimithwalo enzima ethoba inkqubela phambili yomntu.
Yikhumbule, inkxalabo okanye uloyiko oluvela kuwe lunokusekwa kwiingcinga zakho ezingazi nto ohamba ngazo kuhambo lwakho wedwa kwaye ujongana nemicimbi ngokwakho. Enyanisweni, uMdali unawe kwaye ebehlala ehamba nawe . Kwaye njengoko uqala ukubona ngokucacileyo oko Uxhaswa nguMdali ngeendlela ongazilindelanga, iimvakalelo zakho zokukhathazeka okanye uloyiko ziqala ukuphela kancinci .
Kwaye ngalo mzuzu, uthathe isigqibo sokukhusela uxolo olukuwe. Ngu ucinga ukuba uMlilo oKhanyayo woMlilo uvutha yonke into ekucothayo, wenza indawo ehlanjululweyo ehloniphayo kwaye iwuzukise umphefumlo wakho ngoku .
Njengoko uzikhulula kwixesha elidlulileyo elinzima kwaye ukhanyise umthwalo wakho kwindlela yakho, uya kuqala ukuziva ucocekile kwaye ucacile, kwaye kungekudala uza kuyibona imeko okuyo ngoku ngokucacileyo kuyo yonke indawo. Ngale ngqiqo, unokwenza izigqibo zobulumko zokukhokelela kubomi bakho usiya apho ubona umphefumlo wakho ukhanya uqaqambile. Kwaye xa uqhubeka nokubona ukulandelelana kwamanani okungama-1222 kwimbono yakho, umyalezo kukukhanyisa onke amanyathelo endlela yakho, njengoko usiya phambili kuhambo lokukhangela umphefumlo yonke imihla.
Intsingiselo yesi-6 ye-1222: Gxila kwizisombululo
Xa ubona u-1222 evela kuyo yonke indawo ephambi kwakho, kuthetha ukuba uthathe uxanduva lobomi bakho ngokukhuthazwa ukusombulula ingxaki ngokwakho, endaweni yokungabi namandla kwaye ulindele omnye umntu akusombululele ingxaki. .
Ngokholo lwakho, isibindi sakho siyavela silungiselela imicimbi eza kuwe. Nokuba ujongene nemiceli mngeni yobomi, ukhetha umbono oqinisekileyo malunga nendlela yokujongana nemicimbi, kuba umbono wakho oqinisekileyo uya kuvula isango elingabonakaliyo apho izisombululo ziya kuthi zihambe khona . Kwaye kulo msinga wangoku, inombolo yokomfuziselo engu-1222 ikukhumbuza ukuba ube yinkokeli yohambo lwakho lomntu ngokukhetha indlela ofuna ukububumba ngayo ubomi bakho yonke imihla.
Ebomini bakho, utsala iimeko ezihambelana neengcinga zakho eziphindaphindayo kunye neentshukumo. Ukubeka ngokulula, ukungcangcazela kwamandla akho kutsala izinto ojolise kuzo ngokungagungqiyo. Ke, ukuba uhlala ujolise kwimpumelelo, uya kutsala impumelelo. Nangona kunjalo, ukuba uhlala ujonga ukungabikho kokusesikweni, uya kutsala ukungabikho kokusesikweni. Ngokwalo mbono, amagama owabonakalisayo abonisa iingcinga kunye neemvakalelo zakho, kwaye ngenxa yoko, Indalo iphela ibumba iimeko zobomi bakho ngokumamela amagama owangqinayo .
Ngolu luvo lusisiseko lomthetho wokutsala, uyazi ukubaluleka kokuchitha ixesha ugxile kwiingcinga ezilungileyo, ezinje ngeenjongo kunye nezisombululo. Ngokwenza njalo, ungatsala amathuba ngokunyikima okuqinisekileyo okuya kukukhokelela kwiinjongo kunye nezisombululo kwinjongo yakho yomphefumlo.
Ukuhlala kwindlela elungileyo yokuthunywa komphefumlo, uya uwaqonda ngakumbi amagama owathethayo, kuba uyawakhumbula Amagama akho anamandla endalo notshintsho, kwaye banamandla okushenxisa izithintelo kwimbonakalo oyifunayo .
Umzekelo, ibinzana lamagama amabini athethwayo 'Vula iSesame' lisusa umqobo kwaye livule umnyango wokungena kumqolomba ofihlakeleyo wobutyebi obufihliweyo kwincwadi ka-Ali Baba kunye namashumi amane amasela. Njengokuba la magama mabini anamandla anokuwushenxisa njani umqobo kubuncwane bomqolomba, nawe unokukhetha amagama akho afanelekileyo ukushenxisa izithintelo kubutyebi bakho bobomi.
Ngolu lwazi, intsingiselo esoteric ye1222 ukuya ukhethe ngononophelo amagama enza umbono oqinisekileyo kwiliso lengqondo yakho , ke unokuthatha amanyathelo okubonisa ubuncwane kunye neziphumo ezilungileyo ebomini bakho. Kwaye, xa ubona umfanekiso wobungcwele woMdali okanye umbono uvele ngokukhawuleza engqondweni yakho, lo luphawu lwakho lokuba 'uyangena' kuyilo loMdali.
Yintoni omele uyenze xa uqhubeka nokubona i-1222?
Xa uqhubeka ubona i-12: 22 ivela naphi na kwindlela yakho, uyakhunjuzwa ukuba ikamva lakho lixhomekeke kwindlela ocinga ngayo, into oyithethayo, kunye nezinto ozenzayo yonke imihla . Ukusuka kolu nxibelelwano, unokubona ukuba uyile njani indlela yakho ekhokelele kule ndawo ukuyo namhlanje.
Uyaqonda ukuba awukwazi ukutshintsha okwenzekileyo kwixesha elidlulileyo, kodwa uyazi ukuba ungatshintsha ngokuqinisekileyo indlela otolika ngayo eyadlulayo. Ukusuka kolu luvo, xa ugweba into oyenzileyo ngaphambili ngamehlo wokuba ungubani namhlanje, uyaqonda ukuba awusenguye la mntu. Kwaye ngenxa yesi sizathu, uyaqonda ukuba ngekhe uziphathe ngendlela obuziphethe ngayo ngelo xesha. Ngenxa yoko, wafunda izifundo, kwaye uyazi ukuba ukhokelele kwicala elilungileyo xa unokubona ngokucacileyo ukuba awukho kule ndawo ubuqhele ukuba kuyo . Ukhulile kwaye wakhula wangumntu ongcono.
Kwaye okona kubaluleke kakhulu, xa umthanda ngokwenyani umntu onguye, uyaqonda ukuba uyamthanda kwaye uyazixabisa zonke izigqibo zakho namava akho adlulileyo kufanelekile ukuba ube unjalo namhlanje . Khumbula, ubomi bakho buphethe izifundo onokuzifundisa wena kwihlabathi lakho ngendlela ekhethekileyo.
Ukongeza, ngawo onke amanyathelo owathathayo, uMdali uya kutyhila imiqondiso engakumbi phambi kwakho. Okukhona uya kufumana iimpawu ezingcwele, kokukhona luya kukhula ukholo lwakho kuMdali, kuba uyazi ukuba uMdali unawe naphina apho uya khona.
Kwaye naphi na kwaye nanini na xa ubona u-12: 22 iphinda yenzeke, intsingiselo kuku khetha uguquko ngokuyeka iintlungu zangaphambili kunye neenkolelo ezindala, ukuze uye kwinqanaba elilandelayo kwinkululeko . Njengombungu oguqula ibhabhathane kwaye ahlukane nexesha lakhe elidlulileyo, uyaqonda ukuba nawe, kufuneka uphume kwixesha lakho elidlulileyo ukuze uguquke ngempumelelo uye phambili kwindlela yakho.
Lilonke, intsingiselo yokubona u-12: 22 ukuphindaphinda kukuqhubela phambili kumendo wakho ngokukhululeka kunye nenkululeko. Ukushiya ixesha elidlulileyo kunokuba ngumceli mngeni kuba unesiseko esinzulu kuwe, kodwa ukhetha ukuzikhulula kuba umnqweno wakho wokukhula unamandla kakhulu kunokuhlala kule ndawo ukuyo ngoku . Ngalo lonke ixesha ukhula, uyaphila. Embindini wobukho bakho, ukhetha ubomi. Kwaye xa uphonononga nzulu kumnqweno wakho wobomi, uyakukhumbula Umthombo ongunaphakade wabo bonke ubomi uphakathi kuwe .
Ndiyasithanda esi sixhobo sokuCoca siSebenza ngokuNgapheliyo-kwaye Ndiqinisekile ukuba Abahlobo bam aba-5 bayathenga enye
Imiba ye-IKEA KÄT: I-Sofa yokuQala yokuQiniseka kweKati yeHlabathi
Mfutshane kwiSithuba? Iindlela ezinesitayile zokugcina iiPots kunye neepani
Uyenza njani iPom pom
Intsingiselo yenani leengelosi ezingama-333
ukubaluleka kwe-3 33
Iyintoni intsingiselo ye-888